Kuleli zwe lanamuhla akuvamile ihlangabezane ibinzana njengokuthi "endlini zobufebe". Leli igama kwaba kanye evame kakhulu eYurophu futhi ngisho Tsarist Russia. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, la mazwi ngokuphelele inyumbazana ukusetshenziswa futhi manje okutholakala kuphela ezincwadini noma ubuciko amafilimu. Ngakho, it is a sezifebe - Iyini?
Uma peruse ngokucophelela isichazamazwi, ungathola incazelo asikhanyisela ngemithwalo inkulumo ethi "endlini zobufebe". Leli gama lichaza indawo lapho abesifazane zobuhle lula. Bona baziphilise ngokuthengisa ngomzimba wakhe siqu, okungukuthi ngomzimba.
Emlandweni mkhakha endala ohleshulelwe ngomzimba, yasungulwa eziningi izikhungo igama omqondofana, lapho abesifazane bazithengise. Ethandwa kakhulu nabadumile wabo - kungcono endaweni yezifebe, endlini yezifebe, nokubekezela. Nokho, ngisho nawo endulo ngaleso kwakukhona izindawo ezinamagama abo engavamile, lapho amadoda esasichitha isikhathi sakho mahhala nge kumnandi futhi amantombazane amahle.
Nasi umlando umbuzo
Akwaziwa lapho uqala ukuvela owesifazane zobuhle lula, kodwa cishe bayindlu ngemfanelo unomphela impucuko womuntu. Ngisho eGibhithe, Greece Ancient nabaseMesophothamiya ngomzimba ukuthi umsebenzi, lapho enkampanini ekhathalela uyabubekezelela kakhulu ezaziwayo. Ukuze izizwe eziningi zaqala lasendulo indlu umphakathi kwaba engokwemvelo ngokuphelele, ngaphezu kwalokho, ngisho namakhosi nababusi akazange anqikaze ukusebenzisa abesifazane elonakele, abavame phakathi abantu abafundile kakhulu isimo babe.
sezifebe lapho ukwazi edolobheni wahlangana ubuhle - ngokwesibonelo, ngesikhathi kumbiwa emanxiweni yasePompeii Kwatholakala Lupanar. Kuyaphawuleka ukuthi igama lesikhungo livela egameni lesi Latin okungase elihunyushwe ngokuthi "isifebe." Kuyaziwa ukuthi amaRoma ayengadumile kakhulu ukuba abesifazane abaphuma hhayi kuphela ukujabulisa abantu embhedeni, kodwa futhi ukubungaza ingxoxo. Ngokuvamile, lezi zintokazi babe ukusebenza ngempumelelo futhi zezimali, ngoba kwadingeka eyodwa noma ezimbili abashisekeli ocebile. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi eRoma yasendulo ukuba waba yisifebe ngayo! Ayengakwenza ngokuphelele yimuphi owesifazane, wathi lokhu magistracy. Wathola imvume ekhethekile ukusebenza futhi kwadingeka ukugqoka ingubo ephuzi izicathulo ezibomvu. Izindaba ezimweni lapho ngisho unkosikazi nobusuku obungamashumi ababusi wasebenza wokudayisa ngomzimba.
NgeNkathi Ephakathi ke kwakwandile into efana "Bordello ezishibhile", lapho wayesebenzela amantombazanyana abangenalo ngenye indlela ukuze baziphilise. Abapristi akhe bazama ukuqeda ngomzimba njengoba enzeka zafuna kucace ngokuphelele emzini whores, kodwa ehluleke kucedza zezifebe. Ikakhulukazi yanda kuleli zwe bayakuthanda - France.
Ngithanda ukucacisa ukuthi akunjalo kudala inkulumo ethi "endlini zobufebe" yavela kuyi-Europe. Ukunqunywa (nakuba umsindo kancane ezahlukene ezifanayo umthwalo semantic) owenzeka phakathi French Revolution, lapho ngentshiseko ekushintsheni isimo sengqondo umphakathi nasekuhlanganeni kwawo nesihloko zokuziphatha. Ekhulwini nesishiyagalombili, amaFulentshi isinqumo ngokuqondene umbono izinguquko isimo sengqondo kuya priestesses lothando ukuba kuleli zwe afunda ukuzibekezelela kakhudlwana. Ngakho-ke, imisebenzi yabo ibhaliswe ngokomthetho kanye nezakhamuzi France ziye zaphoqeleka emthethweni siyihloniphe. Yezifebe ziye uqambe kabusha endlini ukubekezelelana ukuthi kakade libhekene kakhulu yayo igama indlela abesifazane kufanele azibonayo elonakele French.
Ukubekezelelana izindlu ayevamile ngempela ezweni uthando futhi romance, e nezifebe ngekhulu weshumi nesishiyagalombili wenza ukuthunjwa kwabo ngokusebenza iminyaka emibili noma emithathu. Phela, amakhasimende avame ikhokhwe nabo emizini yabo baphanga amagugu aristocrats French. Abesifazane abaningi ekugcineni iphumula yavula yezifebe yabo njengoba namanje uvame ukubizwa izikhungo ezifanayo e-Europe.
Futhi kuthiwani Russia? Njengoba siye owaqamba igama elithi "indlu zobufebe"? Kuyinto indaba kuhle ezithakazelisayo ukuthi kudingeka siyinake ngokukhethekile. Kodwa khumbula ke.
Kungani igama ukubekezelelana indlu
Ngaphambi kwempi ne Napoleon kwadingeka isikhathi sakhe eRussia, okuyinto abangu libhekene izikhungo nabesifazane zobuhle lula. Zivame okubhekiselwe endaweni yezifebe, okungukuthi, izindawo lapho abakwenzayo ubufebe ekuzitikeni ngokweqile. Kodwa impi ka 1812 kancane washintsha esimweni sengqondo sokuba Russian izinhlangano ezinjalo.
Kwakuwusuku French ayenokuhlangenwe welithi "Indlu Tolerance", kodwa eRussia ke uye savela kancane futhi uye waba eqondakalayo ukuba bakithi umsindo - esikhungweni sezifebe. Lokhu kwakusho ukuthi kwenzekani ngemva kwezindonga zezikhungo zomphakathi liyakulahla, kodwa usenayo indawo. Singasho ukuthi inkampani ngiyekele nezifebe ngokwazo futhi umsebenzi wabo.
ERussia: ukubekezelelana izindlu
Phela, eRussia phambi 1917, ngomzimba kuye kwaba umsebenzi wezomthetho, ngaze ladies ezinye izinzuzo kanye nezinzuzo. Yiqiniso, zonke nompristikazi zonke sothando saba ngokubhaliswa ngokomthetho njengoba isiqinisekiso wathola isitifiketi ngekhava ophuzi. Ngaphandle kwakhe, wayengakwazi ukuthola kunoma iyiphi indlu ezinedumela elibi. Ngalezi amaphoyisa izitifiketi zilandelwa kalula abesifazane elonakele, ngaphezu kwalokho, kwakudingeka ukubika njalo amaphoyisa. ukwelashwa yezifebe kwaba ezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba futhi kumelwe nakanjani ladies abasebenza zezifebe.
Ngokuthakazelisayo, nokudayisa abesifazane eRussia zangaphambi wamavukelambuso angakhetha iyiphi indlu zobufebe emzini. Abakwazanga imingcele e ukunyakaza kwabo. Nakuba ezinye tinhlaka temphakatsi bezimi kuboshelwe nendawo ababehlala kuyo. Futhi, babengakwazi ukuyisekela kalula uze endaweni yokulwa ningaweli umthetho ku vagrancy.
Singasho ukuthi yezifebe e ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili ayeyingxenye ebalulekile emphakathini isiRashiya, kodwa ukukhuluma ngakho ayizange yamukelwe emphakathini okusezingeni eliphezulu. Kwathiwa uvinjelwe lesi sihloko khona emakhosazaneni namantombazane.
Abadayisa ngomzimba ezincwadini
Isihloko zobufebe nasezindaweni zobufebe zivame kakhulu bexhashazwa abalobi nangenkathi ezahlukene. Ngokwesibonelo, uHonoré de Balzac emsebenzini "Brilliance nobumpofu courtesans" yakhe ngempela livulekele isikhathi sakhe ukhuluma ngani isiphetho abesifazane abadayisa ngemizimba yabo.
Akazange ukudlula ukunaka kwakhe kulesi sihloko evundile inoveli L. N. UTolstoy sika "Uvuko", futhi uA I. Kuprin endabeni "umgodi". Ngibhale ngale ndaba zobufebe A. Dumas, Victor Hugo kanye Boris Akunin. Kuze kube manje, indaba abesifazane bawa kukhona lusetshenziswa abalobi emhlabeni wonke.
Cinema izindlu ukubekezelelana
Ababhali kanye nabaqondisi futhi akakwazanga ukugwema isihloko yezifebe futhi wayevame ke emsebenzini wakhe. Omunye amafilimu ezithakazelisayo kakhulu yochungechunge wadedelwa eminyakeni eyisikhombisa edlule. Le filimu ngaphansi kwegama ukuxoxelwa "ukubekezelelana House" - a sendalo amakhosi French. Umlando iwela isigaba "idrama" futhi utshela indaba ngosizi amantombazane ukusebenza esikhungweni sezifebe e France e ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. Ngaphambi izilaleli ozokhula lonke uchungechunge lwezenzakalo ezizoshintsha embule zonke izimfihlo lokhu ivaliwe ezweni kancane, okufanele inqobe kumnandi njalo, futhi ivayolini ukudlala amanothi sengiprofethile.
Kuyaphawuleka ukuthi ifilimu wathola okuxubile yenanelwa esibucayi futhi ngisho okhethwe ukubamba iqhaza Cannes Film Festival. izibukeli eziningi wavuma othinta izintambo kwangempela umphefumulo bese uyibuka mnandi kakhulu.
Yiqiniso, isihloko yezifebe kukhona ebucayi kakhulu. Futhi ngisho kulonyaka ukukhanyiselwa lapho cishe kususa yonke ukuzithiba, alisho obala. Futhi ezingase kuphela kusho into eyodwa - a term seziqalile ku umkhuba, kwenzakala okuhle kakhulu. Phela, umphakathi uyaqhubeka ukubekezelela into akafuni ukuvuma, futhi yini ungafuni ukukhuluma ngokuzwakalayo akusho.
Russian Folk ukuhlakanipha ngemisebenzi temdzabu